अल्लु अर्जुनको चलचित्र‘पुष्पा’ क्रिसमसमा रिलिज हुने
साउथ इन्डियन स्टार अल्लु अर्जुनको निकै प्रतिक्षित चलचित्र‘पुष्पा’ को रिलिज डेट सार्वजनिक भएको छ । अल्लु अर्जुनले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्दै रिलिज डेट सार्वजनिक गरेका हुन्। चलचित्रको पहिलो भाग क्रिसमसको अवसरमा रिलिज हुनेछ । चलचित्र हिन्दी भाषासहित पाँच भाषामा रिलिज...
साउन २२ मा नहुने भयो सामलिङ पावर कम्पनीको शेयर निष्कासन
सामालिङ्ग पावर कम्पनीले साउन २२ गतेबाट आयोजना प्रभावितका लागि निष्कासन गर्न ठिक्क पारेको साधारण शेयर तत्काललाई स्थगित गरेको छ। कम्पनीले भदौ ५ गतेसम्म शेयर बिक्री गर्ने तालिका सार्वजनिक गरेको थियो। कम्पनीले स्थानीय जिल्ला प्रशासनले निषेधाज्ञा लगाउने भएपछि निष्कासन स्थगित गरेको...
यस्तो जीवनसाथी, जसले सधै खुसी दिन्छ
दाम्पत्य जीवन कसरी सुखमय बन्छ ? कसरी उनीहरुलाई खुसी र आनन्द मिल्छ ? किनभने कतिपय दाम्पत्य सम्बन्ध त्यती प्रेमिल हुँदैन । उनीहरुबीच विश्वास र प्रेमको अभाव हुन्छ । त्यही कारण यस्तो दम्पतीबीच मनमुटाव एवं कलह भइरहन्छ । जब दम्पतीबीच कलह...
राजनीतिक परिवारमा हुर्केकी लिमा अधिकारी यसरी बनिन् सफल उद्यमी
दसैँको बेला विराटनगरस्थित कालीको मन्दिरमा भक्तहरूको घुइँचो हुन्थ्यो, मेला लाग्थ्यो। बाह्रतेह्र वर्षकी बालिका लिमा अधिकारी पनि साथीहरुसँगै मेला भर्न जान्थिन्। तर, उनको ध्यान मन्दिरबाट उडेर बेच्न राखिएका सिट्ठी, बेलुन, खेलौना बन्दुक र पटाकामा पुगेर अडिन्थ्यो। उनी दुईचार रुपैयाँमा ती खेलौना...
काठमाण्डाै – विश्व सम्पदामा सूचीकृत काठमाण्डौ उपत्यकाका सम्पदालाई खतराको सूचीबाट हटाइएकोे छ । युनेस्कोको विश्व सम्पदा समितिका १४ देशको अडानका कारण खतराको सूचीबाट हटाइएको हो । युनेस्कोले सन् २०१५ देखि उपत्यकाको सम्पदा क्षेत्रलाई खतराको सूचीमा राखेको थियो । भूकम्पलगत्तै काठमाण्डौ उपत्यकाका...
काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारीको बैठक आज बस्दैछ। पार्टी सभापति एवम् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निवास बुढानिलकण्ठमा दिउँसो तीन बजे बस्ने बैठकमा समसामयिक राजनीति र पार्टीको आगामी १४ औँ महाधिवेशनबारे छलफल हुनेछ। देउवाले मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिने विषयमा पनि पार्टीका शीर्ष...
कहाँ कहाँ चुके ओली र नेपाल ?
२०७७ पुस ५ गते यता भइरहेका नेपाली राजनीतिको अराजनीतिक खेलहरूको परिणति तथा फागुन २३ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसला परिणामले अन्ततः नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को विघटन भयो । २०७५ साल जेठ ३ गतेका दिन तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा माओवादी...
१० राष्ट्रिय राजमार्ग पूर्ण अवरुद्ध, ९६ सडक एकतर्फी सञ्चालनमा
मनसुन शुरू भएसँगै मुलुकका अधिकांश क्षेत्रमा परेको अविरल वर्षा र त्यसपछिको बाढी तथा पहिरोका कारण मुलुकभरका १ सय ५८ राष्ट्रिय राजमार्गमा क्षति पुगेको छ । सडक विभागले दिएको जानकारी अनुसार,बुधवारसम्म १० राष्ट्रिय राजमार्गहरू पूर्ण अवरुद्ध रहेका छन् । गत जेठ...
कृषि र पशुपालन बन्यो लोभलाग्दो उद्यम
बागलुङ : बागलुङ जिल्लाका काठेखोला गउँपालिका–७ रेश पीपल डाँडाका गिरी थापा र मीन थापा दुई भाइ मात्र होइनन्, पेशाका हिसाबले दुवै जना शिक्षक पनि हुन्। यद्यपि गिरी थापा २०५३ सालमा शिक्षक पेसा छाडेर कतार गए। कतारमा १५ वर्ष बसेर नेपाल...
म्याग्दी : च्याङ्ग्राको शरीरबाट झरेर खेर गइरहेको ऊनले बजार पाउने सुनिश्चित भएपछि मुस्ताङका कृषकमा खुसियाली छाएको छ। नेपाली पस्मिना उद्योगीहरुले मुस्ताङको दामोदरकुण्ड लोघेकर गाउँपालिकाको चराङमा च्याङ्ग्राको ऊन संकलन केन्द्र स्थापना गरेपछि ऊनले बजार पाउने सुनिश्चित भएको हो। खेर गइरहेको च्याङ्ग्राको...
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण र प्रदेश नं २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतबीच भेटवार्ता भएको छ । गृह मन्त्रालयमा मङ्गलबार साँझ भएको भेटवार्तामा कोभिड नियन्त्रणका लागि सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकार सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नेबारे छलफल भएको हो । भेटमा गृहमन्त्री...
झापामा अवैध लागुऔषध ब्राउन सुगरसहित एक पक्राउ
झापामा अवैध लागुऔषध ब्राउनसुगरसहित एकजना पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा जिल्लाको गौरादह नगरपालिका-१ गौरादह बजारका ३७ वर्षीय कृष्ण कुमार ताजपुरिया रहेका छन् । इलाका प्रहरी कार्यालय दमकबाट खटिएको प्रहरी टोलीले ताजपुरियालाई चेकजाँच गर्दा उनको साथमा ६ ग्राम अवैध लागुऔषध...
भारत र इङ्ग्ल्याण्डबीचको टेस्ट श्रृङ्खला आजदेखि सुरु हुँदै
काठमाण्डाै – भारत र इङ्ग्ल्याण्डबीचको टेस्ट श्रृङ्खला आजदेखि सुरु हुँदैछ । पहिलो खेल नटिंघममा दिउँसो पौने ४ बजे सुरु हुँदैछ । पाँच टेस्टको श्रृङ्खला खेल्न भारत इङ्ग्ल्याण्ड भ्रमणमा छ । यसअघि इङ्ग्ल्यान्ड भारतमा आएको थियो । त्यसबेला ३–१ ले पराजित भएको...
ओलम्पिकको पुरुष फुटबलमा स्वर्ण पदका लागि स्पेनले ब्राजिलको सामना गर्ने भएको छ । स्पेनले आयोजक जापानलाई अतिरिक्त समयमा १–० ले हराउँदै फाइनलमा स्थान पक्का गरेको हो । खेलमा मार्को असेन्सियोले गोल गर्दै स्पेनलाई जीत दिलाए । उता, ब्राजिलले मेक्सिकोलाई...
कोभिड–१९ दोस्रो लहर जिल्लामा फैलनुअघि नै ज्येष्ठ नागरिकहरू तथा अत्यावश्यक सेवाका व्यक्तिहरूलाई कोभिशिल्ड खोप दिन थालिएको थियो । दोस्रो डोज नआए पनि १३ हजारभन्दा बढीले कोभिशिल्ड खोप लगाए जिल्लामा । त्यसपछि आउन थाल्यो भेरोसेल । यस पटकसम्म तीनपटक भेरोसेल खोप...
काठमाडौं : नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले आजका लागि आह्वान गरेको आफूनिकट केन्द्रीय कमिटीको बैठक स्थगित भएको छ। आज बिहान ११ बजे बुद्धनगरस्थित एक ब्याङ्क्वेटमा बस्ने तय भएको बैठक भोलासम्मका लागि स्थगित भएको नेपाल निकट नेता बेदुराम भूषालले जानकारी दिए। ...
आज कताकता पर्छ पानी?
हाल देशका अधिकांश भूभागको मौसम सामान्यदेखि पूर्ण बदलीको अवस्था छ। प्रदेश १, २, बागमाती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केहि जिल्लामा बुधबार बिहानैदेखि हल्का देखि मध्यम वर्षा भैरहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। महाशाखाका अनुसार आज दिनभर प्रदेश १, २ र...
कोरोनाको पूर्ण खोप लगाउने अर्को जिल्ला बन्यो मुस्ताङ
२० साउन, काठमाडौं । मुस्ताङ पनि १८ वर्ष भन्दामाथिका सबै नागरिकलाई कोभिड–१९ विरुद्धको खोप लगाउने जिल्ला बनेको छ । १८ वर्ष भन्दामाथिका सबै नागरिकलाई खोप लगाउने पहिलो जिल्ला मनाङ बनेको थियो । स्वास्थ्य कार्यालय मुस्ताङका प्रमुख टीकाराम भण्डारीका अनुसार जिल्लाका...
एक मिनेटको समय निकै कम हुन्छ । तर ६० सेकेन्डको यही समय भारतका सबैभन्दा धनी व्यवसायी मुकेश अम्बानी र उनको कम्पनी रिलायन्स इन्डस्ट्रिज लिमिटेडका लागि निकै महत्त्व राख्दछ । किनभने अम्बानी र उनको कम्पनीले प्रत्येक मिनेट १.१ करोड भारतीय...
काठमाडौं : सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्सले आजदेखि देखि आईपीओ बिक्री खुला भएको छ। प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँको दरले ६० लाख कित्ता आईपीओ निष्कासन गरेको हो। जसमध्ये कर्मचारीलाई ३ लाख ५ प्रतिशत र म्युचुअल फन्डलाई ५ प्रतिशतले हुने ३ लाख कित्ता सेयर छुट्याएको छ। बाँकी...
काठमाडौं बाहिरका नेता नआइपुगेपछि स्थगित भयो नेपाल पक्षको केन्द्रीय कमिटी बैठक
नेकपा एमालेको वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षको केन्द्रीय कमिटी बैठक बिहीबार बस्ने भएको छ । यसअघि बैठक बुधवारका लागि तय भएको थियो । बुधवारका लागि तय भएको बैठकमा काठमाडौं बाहिरबाट आउनुपर्ने नेताहरू नआइपुगेको भन्दै बैठक सारिएको हो । नेपाल...
काठमाण्डौ – अफगानिस्तानका रक्षामन्त्रीको घरमा विद्रोही समूहले कार बम आक्रमण गर्दा कम्तीमा चार जनाको ज्यान गएको छ । ११ जना घाइते भएका छन् । आक्रमणका बेला रक्षामन्त्री बिस्मिल्लाह खान मोहम्मदी घरबाहिर भएकाले सुरक्षित रहनुभएको बीबीसीले जनाएको छ । उहाँले घटनापछि...
र्&amp;zwj;यापर हनी सिंह अर्थात् हृदयेश सिंहविरुद्ध उनकी पत्नी शालिनी तलवारले घरेलु हिंसाको मुद्दा दर्ता गरेकी छन् । तलवारले दिल्लीको तीस हजारी कोर्टमा मुद्दा दर्ता गरेकी हुन् । उनले घरेलु हिंसाबाट महिलाको सुरक्षा अधिनियमअनुसार मामिला दर्ता गरेको बताइएको छ । मुद्दालाई...
बागलुङ जिल्लाका काठेखोला गउँपालिका–७ रेश पीपल डाँडाका गिरी थापा र मीन थापा दुई भाइ मात्र होइनन्, पेशाका हिसाबले दुवै जना शिक्षक पनि हुन् । यद्यपि गिरी थापा २०५३ सालमा शिक्षक पेसा छाडेर कतार जानुभयो । कतारमा १५ वर्ष बसेर नेपाल...